Politika momba ny tsiambaratelo - Jereo ny rapport
Last nohavaozina Desambra 24, 2020
Misaotra anao nifidy ny ho anisan'ny fiarahamonina misy anay Jereo ny Rapport, LLC, manao bizina toy Jereo Rapport (AKA - watchrapport.com) ("Jereo Rapport (AKA - watchrapport.com)","we","us","ny"). Vonona izahay hiaro ny mombamomba anao sy ny zonao hanana tsiambaratelo. Raha manana fanontaniana na ahiahy momba ity fampandrenesana momba ny tsiambaratelo ity ianao, na ny fanaonay mikasika ny mombamomba anao manokana, dia mifandraisa aminay help@watchrapport.com.
Rehefa ianao tsidiho ny tranokalanay https://watchrapport.com/ (ny "Website"), mampiasa ny fampiharana finday, ampiasao ny fampiharana Facebook anay, araka ny tranga (ny "App") ary amin'ny ankapobeny, ampiasao ny serivisinay rehetra (ny "Services", izay misy ny Website ary App), ankasitrahanay fa matoky anay amin'ny mombamomba anao ianao. Raisinay ho zava-dehibe tokoa ny fiainanao manokana. Amin'ity fampandrenesana momba ny tsiambaratelo ity dia mitady hanazava aminao amin'ny fomba mazava indrindra izahay hoe inona ny angona angoninay, ny fomba fampiasanay azy ary ny zonay mifandraika amin'izany. Manantena izahay fa handany fotoana hamakiana azy io tsara ianao, satria zava-dehibe izany. Raha misy teny ao amin'ity fampandrenesana momba ny tsiambaratelo izay tsy ekenao ity dia mijanona azafady mba hampiatoana ny fampiasana ny Serivisinay avy hatrany.
Ity fampandrenesana manokana ity dia mihatra amin'ny fampahalalana rehetra nangonina tamin'ny alàlan'ny Serivisinay (izay, araka ny voalaza etsy ambony, dia misy ny anay Website ary App), ary koa, ny serivisy mifandraika amin'izany, varotra, marketing na hetsika.
Azafady mba vakio tsara ity fanamarihana momba ny tsiambaratelo ity satria hanampy anao hahafantatra ny zavatra ataonay amin'ny fampahalalana angoninay.
1. INFORMATION INDRINDRA IZAO NO AZONAO?
2. Ahoana no ampiasanay ny fampahalalana nataonao?
3. VOAZO VOLA AMIN'OLO IZAO NY INFORMATION ANAO?
4. IZA NO TOKONY HOAZOANA NY FOMBA ANAO?
5. MAMPIASA Cookie sy Teknolojika fanodinana hafa ve isika?
6. MAMPIASA NY GOOGLE MAPS PLATFORM APIS VE IZANY?
7. Ahoana no fomba hitondrantsika ny LOGIN'NY SOSIALY?
8. INONA NO TOKONTSIKA EO AMIN'NY WEBSITES AN'NY FIVORIANA FAHATELO?
9. METY HETSIKA MITADIAVA NO HITONDRANTSIKA NY MOMBA ANAO?
10. AHOANA NO ATONONTSIKA HITAOVANA NY MOMBA ANAO?
11. MANGATAKA FAHAMARINANA AMIN'NY MINORA ISIKA VE?
12. IZA NO ZON'OLOMBELONAO?
13. Fifehezana ny fiasa tsy azo zahana
14. AZON'ANDRIAMANITRA MANANA NY ZON'OLOMBELON'ANDRIAMANITRA VE?
15. MANAO fanavaozana ity fampandrenesana ity ve isika?
16. Ahoana no ahafahanao mifandray aminao momba ity fampandrenesana ity?
17. Ahoana no ahafahanao mijery, manavao, na manafoana ny daty azonay avy aminao?
Fampahalalana manokana ampahafantarinao aminay
Raha afohezina: Manangona fampahalalana manokana omenao anay izahay.
Manangona ny mombamomba anao manokana izay omenao an-tsitrapo anay izahay rehefa misoratra anarana amin'ny Serivisy, maneho fahalianana amin'ny fahazoana vaovao momba anay na ny vokatra sy serivisy, rehefa mandray anjara amin'ny hetsika ao amin'ny Services na raha tsy izany rehefa mifandray aminay ianao.
Ny mombamomba anao manokana izay angoninay dia miankina amin'ny tontolon'ny fifandraisanao aminay sy ny Services, ny safidy ataonao sy ny vokatra ary ny fampiasa ampiasanao. Ny fampahalalana manokana angoninay dia mety ahitana ireto manaraka ireto:
Fampahalalana manokana omenao. Manangona izahay anarana; laharan-telefaona; adiresy mailaka; adiresy mailaka; titre asa; anarana mpampiasa; ny tenimiafina; fifandraisan'ny fifandraisana; angona fifandraisana na fanamarinana; adiresy faktiora; ary fampahalalana mitovy amin'izany.
Data momba ny fandoavam-bola. Azonay angonina ny angon-drakitra ilaina hanodinana ny fandoavanao vola raha toa ianao ka mividy, toy ny nomeraon-telefaonanao (toy ny nomeraon'ny carte de crédit), ary ny kaody fiarovana mifandraika amin'ny fitaovanao. Ny tahirin-kevitra momba ny fandoavam-bola rehetra dia tahirin'ny Shopify . Mety ho hitanao eto ny rohy fampandrenesana momba azy ireo: https://www.shopify.com/legal/privacy.
Data momba ny fidirana amin'ny haino aman-jery sosialy. Azonay omena anao ny safidy hisoratra anarana aminay amin'ny alàlan'ny antsipirian'ny kaonty media sosialy misy anao, toa ny Facebook, Twitter na kaontinao media sosialy hafa. Raha misafidy ny hisoratra anarana toy izao ianao dia hanangona ny fampahalalana voalaza ao amin'ilay faritra antsoina hoe "AHOANA NO HOMANANAY NY LOGIN'NY SOSIALY ANAO"eto ambany.
Ny mombamomba anao manokana izay omenao anay dia tsy maintsy marina sy feno ary marina ary tokony hampahafantarinao anay ny fiovana rehetra momba ny mombamomba anao.
Nangonina ho azy ny fampahalalana
Raha afohezina: Ny fampahalalana sasantsasany - toy ny adiresy Internet Protocol (IP) anao sy / na ny toetran'ny mpizaha sy ny fitaovana - dia voaangona ho azy rehefa mitsidika ny anay ianao Services.
Manangona fampahalalana sasany ho azy izahay rehefa mitsidika, mampiasa na mivezivezy ny Services. Ity fampahalalana ity dia tsy manambara ny mombamomba anao manokana (toy ny anaranao na ny mombamomba anao) fa mety misy fampahalalana momba ny fitaovana sy ny fampiasana azy, toa ny adiresy IP, ny mampiavaka ny fitaovanao sy ny fitaovana, ny rafitra fandidiana, ny fiteny tianao, ny URL ilainao, ny anaran'ny fitaovana, ny firenena, ny toerana misy anao , fampahalalana momba ny fomba sy ny fotoana ampiasanao ny anay Services ary fampahalalana teknika hafa. Ity fampahalalana ity dia ilaina indrindra amin'ny fitazonana ny filaminana sy ny fiasan'ny Services, ary ho an'ny tanjonay momba ny fanadihadiana sy ny tatitra anatiny.
Toy ny orinasa maro, manangona vaovao amin'ny alàlan'ny cookies sy teknolojia mitovy amin'izany ihany koa izahay.
Ny fampahalalana azonay dia misy:
Data momba ny log sy ny fampiasana. Ny angon-drakitra momba ny log sy ny fampiasana dia fampahalalana mifandraika amin'ny serivisy, diagnostika, fampiasana ary ny fahombiazan'ny mpampiasa anay rehefa miditra na mampiasa anay ianao Services ary izay noraketinay anaty rakitra fisie. Miankina amin'ny fomba fifandraisanao aminay, ity data log ity dia mety misy ny adiresy IP anao, ny mombamomba ny fitaovanao, ny karazan-javakanto sy ny toerana misy anao ary ny fampahalalana momba ny asanao ao amin'ny Services (toy ny tombo-kase daty / ora mifandraika amin'ny fampiasanao, pejy sy fisie nojerena, karoka sy hetsika hafa ataonao toy ny endri-javatra ampiasainao), fampahalalana momba ny zava-mitranga amin'ny fitaovana (toy ny hetsiky ny rafitra, tatitra momba ny lesoka (indraindray antsoina hoe 'dump dumps' ) sy ny fikirakirana ny fitaovana).
Data Data. Manangona angon-drakitra fitaovana toa ny fampahalalana momba ny solosainao, telefaona, takelaka na fitaovana hafa ampiasainao hidirana amin'ny Services. Miankina amin'ny fitaovana ampiasana azy, ity data ity dia mety misy fampahalalana toy ny adiresy IP (na mpizara proxy) anao, nomeraon-telefaona sy mari-panondroana ny fampiharana, ny toerana, ny karazana browser, ny maodelin'ny serivisy mpanome serivisy amin'ny Internet ary / na ny mpitatitra finday, ny rafitra fikirakirana ary ny fikirakirana ny rafitra. fampahalalana.
Data momba ny toerana. Manangona angon-drakitra misy toerana izahay toy ny fampahalalana momba ny toerana misy ny fitaovanao, izay mety na marina na tsy marina. Ny habetsaky ny angona angoninay dia miankina amin'ny karazana sy ny fampiasa ao amin'ilay fitaovana ampiasainao hidirana amin'ilay Services. Ohatra, mety hampiasa GPS sy teknolojia hafa izahay hanangonana angona geolocation izay milaza aminay ny toerana misy anao ankehitriny (miorina amin'ny adiresy IP anao). Azonao atao ny miala amin'ny famelana anay hanangona ity mombamomba ity na amin'ny fandavana ny fidirana amin'ny fampahalalana na amin'ny alàlan'ny fampandehanana ny toerana misy anao eo amin'ny fitaovanao. Mariho anefa fa raha misafidy ny hiala ianao dia mety tsy ho afaka hampiasa lafin-javatra sasany amin'ny Serivisy.
Fampahalalana nangonina tamin'ny alàlan'ny App
Raha afohezina: Manangona vaovao momba anao izahay toerana geo, fitaovana finday, manery fampandrenesana, ary alalana amin'ny Facebook rehefa mampiasa ny App anay ianao.
Raha mampiasa ny App izahay dia manangona ireto fampahalalana manaraka ireto ihany koa:
Fampahalalana Geo-toerana. Azontsika atao ny mangataka fidirana na fahazoan-dàlana hanara-maso ny fampahalalana mifototra amin'ny toerana misy anao amin'ny findainao, na mitohy na mandritra ny ampiasanao ny App anay, mba hanomezana tolotra miorina amin'ny toerana sasany. Raha te hanova ny fidirana na fahazoan-dàlanay ianao dia azonao atao izany amin'ny toeran'ny fitaovanao.
Fampiasa amin'ny finday. Azontsika atao ny mangataka fidirana na fahazoan-dàlana amin'ireo fiasa sasany avy amin'ny fitaovanao finday, ao anatin'izany ny fitaovanao finday sms hafatra, fampahatsiahivana, fakan-tsary, Bluetooth, sy ny fiasa hafa. Raha te hanova ny fidirana na fahazoan-dàlanay ianao dia azonao atao izany amin'ny toeran'ny fitaovanao.
Data momba ny finday. Manangona avy hatrany ny mombamomba ny fitaovana (toy ny ID ny fitaovana finday, ny maodelinao ary ny mpanamboatra anao), ny rafitra fiasa, ny mombamomba ny angona sy ny fampahafantarana ny rafitra, ny laharan-tariby sy ny mari-pahaizana momba ny rindranasa, ny karazan-tsokajy sy ny kinova, ny maodelin'ny serivisy mpanome tolotra Internet sy / na ny mpitatitra finday, ary adiresy Internet Protocol (IP) (na mpizara proxy). Raha mampiasa ny App izahay dia mety manangona vaovao momba ny tamba-jotra telefaona mifandraika amin'ny fitaovanao finday koa ianao, ny rafi-piasana na ny sehatr'asa misy ny findainao, ny karazana fitaovanao finday, ny ID misy anao manokana sy ny mombamomba anao momba ny fiasa amin'ny ny App no ​​nidiranao.
Mandrosoa fampandrenesana. Azonao atao ny mangataka handefa anao fampandrenesana fanindriana momba ny kaontinao na ny endri-javatra sasany amin'ny App. Raha te hiala ianao amin'ny fahazoana ireo karazana fifandraisana ireo dia azonao atao ny mamono azy ireo eo amin'ny toeran'ny fitaovanao.
Fahazoan-dàlana amin'ny Facebook. Miditra an-tsokosoko izahay amin'ny fidirana amin'ny Facebook Ny fampahalalana momba ny kaonty fototra, ao anatin'izany ny anaranao, ny mailaka, ny lahy sy ny vavy, ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana, ny tanàna ankehitriny ary ny sarin'ny URL misy ny mombamomba anao, ary koa ny fampahalalana hafa izay safidinao hampahafantarana imasom-bahoaka. Azontsika atao koa ny mangataka ny fahazoana alalana hafa mifandraika amin'ny kaontinao, toy ny namana, ny kitapo ary ny zavatra tianao, ary mety hisafidy ny hanome na handavana anay ianao amin'ny fahazoan-dàlana tsirairay avy. Raha mila fanazavana fanampiny momba ny fahazoan-dàlana ao amin'ny Facebook, jereo ny Taratasy Fahazoan-dàlana Facebook page.
Ilaina indrindra ity fampahalalana ity mba hitazonana ny filaminana sy ny fizotran'ny App, ho an'ny famahana olana sy ho an'ny fanadihadianay anatiny sy ny tanjon'ny tatitra.
Fampahalalana nangonina avy amin'ny loharano hafa
Raha afohezina: Mety hanangona angon-drakitra voafetra avy amin'ny tahiry ho an'ny daholobe izahay, mpiara-miombon'antoka amin'ny marketing, sehatra media sosialy, ary loharano hafa avy any ivelany.
Mba hanatsarana ny fahafahanay manome marketing, tolotra ary serivisy mifandraika aminao ary hanavao ny firaketana an-tsainay, dia mety hahazo vaovao momba anao izahay avy amin'ny loharano hafa, toy ny tahiry ho an'ny daholobe, mpiara-miombon'antoka amin'ny marketing, programa afiliana, mpamatsy angona, sehatra media sosialy, ary koa avy amin'ny antoko fahatelo. Ity fampahalalana ity dia misy adiresy mailaka, lohateny asa, adiresy mailaka, nomeraon-telefaona, angon-drakitra fikasana (na data momba ny fitondran-tena ho an'ny mpampiasa), adiresy Internet Protocol (IP), mombamomba ny haino aman-jery sosialy, URL-n'ny media sosialy ary mombamomba anao manokana, ho an'ny doka sy fampiroboroboana hetsika . Raha mifanerasera aminay amin'ny sehatra media sosialy ianao amin'ny alàlan'ny kaontinao media sosialy (ohatra Facebook na Twitter), dia mahazo fampahalalana manokana momba anao toa ny anaranao, ny adiresy mailakao ary ny miralenta ianao. Ny mombamomba anao manokana izay angoninay avy amin'ny kaonty media sosialy dia miankina amin'ny fikirana tsiambaratelo momba ny kaontinao.
Raha afohezina: Izahay dia manodina ny mombamomba anao amin'ny tanjona mifototra amin'ny tombontsoan'ny orinasa ara-dalàna, ny fanatanterahana ny fifanarahanay aminao, ny fanajana ny adidy ara-dalàna ary / na ny fanekenao.
Mampiasa ny mombamomba anay voaangona amin'ny alàlanay izahay Services ho an'ny tanjona ara-barotra isan-karazany voalaza etsy ambany. Izahay dia manodina ny mombamomba anao manokana amin'ireto tanjona ireto amin'ny fiankinan-doha amin'ny tombotsoanay ara-dalàna ara-dalàna, mba hidirana na hanao fifanarahana aminao, miaraka amin'ny fanekenao, sy / na amin'ny fanajana ny adidinay ara-dalàna. Izahay dia manondro ny toerana fanodinana manokana miankina amin'ny tanjona tsirairay voalaza eto ambany.
Mampiasa ny vaovao angoninay na azonay izahay:
Hanamorana ny famoronana kaonty sy ny fizotran'ny logon. Raha misafidy ny hampifandray ny kaontinao aminay amin'ny kaonty antoko fahatelo ianao (toa ny kaonty Google na Facebook anao), dia ampiasainay ny fampahalalana nomenao anay hanangona avy amin'ireo antoko fahatelo ireo hanamorana ny famoronana kaonty sy ny fizotran'ny fidirana amin'ny fanatanterahana ny fifanarahana. Jereo ny fizarana etsy ambany mitondra ny lohateny "AHOANA NO HOMANANAY NY LOGIN'NY SOSIALY ANAO"raha mila fanazavana fanampiny.
Mandefa fijoroana vavolombelona. Mandefa fijoroana vavolombelona izahay Services izay mety misy fampahalalana manokana. Alohan'ny handefasana fijoroana vavolombelona, ​​dia hahazo ny fanekena hampiasa ny anaranao sy ny atin'ny fijoroana vavolombelona izahay. Raha te-hanavao ianao, na hamafa ny fijoroanao vavolombelona, ​​mifandraisa aminay privacy@watchrapport.com ary aza hadino ny mampiditra ny anaranao, ny toerana misy ny fijoroana ho vavolombelona ary ny mombamomba anao.
Mangataha valiny. Azontsika atao ny mampiasa ny mombamomba anao hangataka hevitra ary hifandray aminao momba ny fampiasanao ny anay Services.
Mba ahafahan'ny fifandraisana amin'ny mpampiasa sy ny mpampiasa. Azontsika atao ny mampiasa ny mombamomba anao mba hahafahan'ny mpampiasa mifampiresaka amin'ny alàlan'ny faneken'ny mpampiasa tsirairay.
Mitantana kaontin'ny mpampiasa. Azontsika atao ny mampiasa ny mombamomba anao amin'ny tanjon'ny fitantanana ny kaontinay sy hitazonana azy io amin'ny filaminana.
Handefa fampahalalana momba ny fitantanan-draharaha aminao. Azontsika atao ny mampiasa ny mombamomba anao manokana handefasanao vokatra, serivisy ary fampahalalana vaovao momba an'io sy / na fampahalalana momba ny fanovana ny fepetra, ny fepetra ary ny politikantsika.
Hiarovana ny serivisinay. Azontsika atao ny mampiasa ny mombamomba anao ho ampahany amin'ny ezakanay hitazomana ny Services azo antoka sy azo antoka (ohatra, amin'ny fanaraha-maso sy fisorohana hosoka).
Mba hampiharana ny fepetra, fepetra ary politikantsika amin'ny tanjon'ny orinasa, hanaraka ny fepetra takian'ny lalàna sy ny lalàna na mifandraika amin'ny fifanarahana.
Mamaly ny fangatahana ara-dalàna sy hisorohana ny fahavoazana. Raha mahazo subpoena na fangatahana ara-dalàna hafa isika, dia mety mila mandinika ny angon-drakitra hananantsika hamaritana ny fomba hamaliana izany.
Fenoy sy tantano ny kaomandinao. Azontsika atao ny mampiasa ny mombamomba anao hanatanterahana sy hitantanana ny kaomandinao, ny fandoavam-bola, ny fiverenanao ary ny fifanakalozana natao tamin'ny Services.
Mitantana fisarihana loka sy fifaninanana. Azontsika atao ny mampiasa ny mombamomba anao hitantanana sary sy fifaninanana rehefa mifidy ny handray anjara amin'ny fifaninanana izahay.
Manolotra sy manamora ny fandefasana serivisy ho an'ny mpampiasa. Azontsika atao ny mampiasa ny mombamomba anao hanomezana anao ny serivisy nangatahina aminao.
Mamaly ny fanontanian'ny mpampiasa / manolotra fanampiana ho an'ireo mpampiasa. Azontsika atao ny mampiasa ny mombamomba anao hamaly ny fanontanianao ary hamaha izay mety ho olana mety hitranga amin'ny fampiasana ny serivisinay.
Mba handefasana aminao ny fifandraisana ara-barotra sy fampiroboroboana. Izahay sy / na ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny antoko fahatelo dia afaka mampiasa ny mombamomba anao alefanao aminay ho an'ny tanjonay ara-barotra, raha mifanaraka amin'ny safidinao varotra izany. Ohatra, rehefa maneho fahalianana amin'ny fahazoana vaovao momba antsika na momba antsika Services, ny fisoratana anarana amin'ny marketing na ny fifandraisana aminay, dia hanangona ny mombamomba anao manokana izahay. Azonao atao ny miala amin'ny mailaky ny marketing amin'ny fotoana rehetra (jereo ny "IZA NO ZON'OLOMBELONAO"etsy ambany).
Manolora dokam-barotra lasibatra ho anao. Azontsika atao ny mampiasa ny mombamomba anao hampivelarana sy hanehoana atiny manokana sy dokam-barotra (ary hiara-miasa amin'ireo antoko fahatelo manao izany) mifanaraka amin'ny tombontsoanao sy / na ny toerana misy anao ary handrefesana ny fahombiazany.
Ho an'ny tanjona orinasa hafa. Azontsika atao ny mampiasa ny mombamomba anao amin'ny tanjona orinasa hafa, toy ny fandalinana angona, ny famantarana ny fironana fampiasana, ny famaritana ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitray hampiroborobo ary ny fanombanana sy fanatsarana ny Services, vokatra, marketing ary ny zavatra niainanao. Azontsika atao ny mampiasa sy mitahiry an'io fampahalalana io amin'ny endrika mitambatra sy tsy mitonona anarana mba tsy hifandraisany amin'ireo mpampiasa farany azy ary tsy misy fampahalalana momba azy manokana. Tsy hampiasa fampahalalana mombamomba anao izahay raha tsy mahazo alalana aminao.
Raha afohezina: Izahay ihany no mizara fampahalalana amin'ny alàlan'ny alalanao, hanaraka ny lalàna, hanomezana tolotra anao, hiarovana ny zonao, na hanefa ny adidin'ny orinasa.
Azontsika atao ny manodina na mizara ny angon-drakitra izay tazoninay mifototra amin'ireto manaraka ireto:
Fanekena: Azontsika atao ny manodina ny angon-drakitrao raha toa ianao ka nanome alalana manokana hampiasa ny mombamomba anao ho an'ny tanjona manokana.
Liana ara-dalàna: Azontsika atao ny manodina ny angon-drakitrao raha ilaina izany mba hahatratrarana ny tombontsoan'ny orinasa ara-dalàna.
Fampisehoana fifanarahana: Raha nanao fifanarahana taminao izahay dia azonay atao ny manamboatra ny mombamomba anao mba hanatanterahana ny fe-potoana nifanarahanay.
Adidy ara-dalàna: Azonay atao ny mampahafantatra ny mombamomba anao izay takianay ara-dalàna hanao izany mba hanarahana ny lalàna manan-kery, ny fangatahan'ny governemanta, ny fizotran'ny fitsarana, ny didim-pitsarana na ny fizotry ny lalàna, toy ny valin'ny didim-pitsarana na taratasy fiantsoana (anisan'izany ny valiny amin'ny manampahefana amin'ny fanjakana hamaly ny filaminam-pirenena na ny fampiharana ny lalàna).
Tombontsoa lehibe: Azonay atao ny mampiharihary ny mombamomba anao izay inoantsika fa ilaina ny manadihady, misoroka, na mandray andraikitra manoloana ny fanitsakitsahana ny politikantsika, ahiahiana ny fisolokiana, ny toe-javatra misy atahorana hampidi-doza ny olona sy ny hetsika tsy ara-dalàna, na ho porofo amin'ny raharaham-pitsarana izay tafiditra izahay.
Ny tena manokana dia mety mila manodina ny angon-drakitrao izahay na mizara ny mombamomba anao amin'ireto toe-javatra manaraka ireto:
Famindrana asa. Azontsika atao ny mizara na mamindra ny mombamomba anao mifandraika amin'ny, na mandritra ny fifampiraharahana momba ny fampitambarana, fivarotana fananan'ny orinasa, famatsiam-bola, na fahazoana ny rehetra na ny ampahany amin'ny orinasanay amin'ny orinasa hafa.
Mpivarotra, mpanolotsaina ary mpanome tolotra antoko fahatelo hafa. Azontsika atao ny mizara ny angon-drakitrao amin'ireo mpivarotra avy amin'ny antoko fahatelo, mpanome tolotra, mpifanaraka na mpandraharaha izay manao serivisy ho anay na amin'ny anarantsika ary mitaky ny fidirana amin'ireo fampahalalana ireo hanao an'io asa io. Ohatra amin'izany ny: fanodinana vola, fandalinana data, fandefasana mailaka, serivisy fampiantranoana, serivisy ho an'ny mpanjifa ary ezaky ny varotra. Azontsika atao ny mamela ny antoko fahatelo voafantina hampiasa teknolojia fanarahan-dia amin'ny Services, izay hahafahan'izy ireo manangona angon-drakitra momba anay momba ny fomba fifandraisanao aminay Services rehefa ela. Ity fampahalalana ity dia azo ampiasaina, ankoatry ny zavatra hafa, mamakafaka sy manara-maso data, mamaritra ny lazan'ireo atiny, pejy na fiasa sasany, ary mahatakatra tsara kokoa ny hetsika an-tserasera. Raha tsy voalaza eto amin'ity fampandrenesana ity dia tsy mizara, mivarotra, manofa na mivarotra ny mombamomba anao amin'ny antoko fahatelo izahay ho an'ny tanjon'ny fampiroboroboana. Manana fifanarahana miaraka amin'ireo mpikirakira angon-drakitra izahay, izay natao hanampiana hitandrina ny mombamomba anao manokana. Midika izany fa tsy afaka manao na inona na inona amin'ny mombamomba anao izy ireo raha tsy efa nasainay nanao izany izy ireo. Tsy hizara ny mombamomba anao amin'ny fikambanana hafa ankoatra anay koa izy ireo. Izy ireo koa dia manolo-tena hiaro ny angon-drakitra tazonin'izy ireo ho anay ary hitazona azy io mandritra ny fotoana ampianarinay.
Mpanao dokam-barotra avy amin'ny antoko fahatelo. Afaka mampiasa orinasa mpanao dokambarotra ankolafy izahay hanaterana doka rehefa mitsidika na mampiasa ny Services. Ireo orinasa ireo dia mety hampiasa fampahalalana momba ny fitsidihanao ny tranokalanay (s) sy tranokala hafa izay voarakitra ao anaty cookies web sy teknolojia fanarahan-dia hafa mba hanomezana doka momba ny entana sy serivisy mahaliana anao.
Affiliate. Azontsika atao ny mizara ny mombamomba anao amin'ireo mpiara-miasa aminay, ka amin'izany dia takianay ireo mpikambana ireo hanaja ity fampandrenesana momba ny tsiambaratelo ity. Ny mpiara-miasa dia misy ny orinasanay sy ny orinasam-pandraharahana, ny mpiara-miombon'antoka na orinasa hafa izay fehezinay na voafehin'ny fifehezana iraisana miaraka aminay.
Mpiara-miasa. Azontsika atao ny mizara ny fampahalalana anao amin'ny mpiara-miasa aminay hanolotra anao vokatra, serivisy na fampiroboroboana sasany.
Manolotra rindrina. Ny App dia mety mampiseho "rindrina tolotra" an'ny antoko fahatelo. Ny rindrina tolotra toa izany dia ahafahan'ny mpanao dokambarotra ankolafy manolotra vola virtoaly, fanomezana na zavatra hafa ho an'ny mpampiasa ho setrin'ny fanekena sy fahavitan'ny tolotra doka. Ny rindrina fanolorana toy izany dia mety hiseho ao amin'ny App anay ary haseho aminao arakaraka ny angona sasany, toy ny faritra jeografikao na ny fampahalalana momba ny demografika anao. Rehefa tsindrio ny rindrin'ny tolotra dia hoentina any amin'ny tranokala ivelany an'ny olon-kafa ianao ary hiala amin'ny App anay. Mpamaritra tokana, toy ny ID an'ny mpampiasa anao, no zaraina amin'ny mpamatsy rindrina tolotra mba hisorohana ny hosoka sy hanomezam-bola tsara ny kaontinao amin'ny valisoa mifandraika amin'izany. Azafady azafady fa tsy mifehy ireo tranokalan'ny antoko fahatelo izahay ary tsy manana andraikitra mifandraika amin'ny atin'ny tranokala toy izany. Ny fampidirana rohy mankany amin'ny tranokalan'ny antoko fahatelo dia tsy midika ho fanohananay an'io tranonkala io. Noho izany dia tsy manome antoka momba ny tranonkalan'ny antoko fahatelo izahay ary tsy tompon'andraikitra amin'ny fahaverezana na fahasimbana ateraky ny fampiasana tranokala toy izany. Ho fanampin'izay, rehefa miditra amin'ny tranokalan'ny antoko fahatelo ianao dia azafady azafady fa ny zonao rehefa miditra sy mampiasa ireo tranokala ireo dia hanjakan'ny fampandrenesana momba ny tsiambaratelo sy ny fepetra momba ny serivisy mifandraika amin'ny fampiasana ireo tranonkala ireo
Raha afohezina: Ireo antoko fahatelo manaraka ihany no zarainay vaovao.
Izahay dia mizara sy mampahafantatra ny mombamomba anao amin'ireo antoko fahatelo manaraka. Nosokajinay ny ankolafy tsirairay mba hahafantaranareo tsara ny tanjon'ny fanangonana angon-drakitra sy ny fomba fanodinana anay. Raha nanamboatra ny angon-drakitrao izahay mifototra amin'ny fanekenao ary maniry ny hanafoana ny fanekenao ianao, azafady mifandraisa aminay amin'ny alàlan'ny antsipirian'ny fifandraisana omena ao amin'ilay fizarana etsy ambany mitondra ny lohateny hoe "Ahoana no ahafahanao mifandray aminao momba ity fampandrenesana ity?".
Ny doka, ny varotra mivantana ary ny taranaka mitarika
Raha afohezina: Afaka mampiasa cookies sy teknolojia fanarahana hafa izahay hanangonana sy hitahirizana ny mombamomba anao.
Azontsika atao ny mampiasa cookies sy teknolojia fanarahan-dia mitovy amin'izany (toy ny fanilo amin'ny Internet sy ny piksel) hahazoana miditra na mitahiry vaovao. Ny fampahalalana manokana momba ny fampiasantsika ny haitao toy izany sy ny fomba ahafahanao mandà ny cookies sasany dia voalaza ao amin'ny Fahatsiarovan'ny Cookie.
Raha afohezina: Eny, mampiasa API Google Maps Platform izahay mba hanomezana tolotra tsara kokoa.
izany Website or App mampiasa API Google Maps Platform izay iharan'ny Fepetran'ny Serivisy Google. Azonao atao ny mahita ny Google Maps Platform Terms of Service Eto. Raha te hahalala bebe kokoa momba ny Politikan'i Google momba ny tsiambaratelo, dia jereo ity rohy. Izahay dia mahazo sy mitahiry amin'ny fitaovanao ('cache') ny toerana misy anao. Azonao atao ny manafoana ny fanekenao amin'ny fotoana rehetra amin'ny alàlan'ny fifandraisana aminay amin'ny antsipiriany momba ny fifandraisana atolotra amin'ny faran'ny antontan-taratasy ity.
Raha afohezina: Raha misafidy ny hisoratra anarana na hiditra amin'ny serivisinay amin'ny alàlan'ny kaonty media sosialy ianao, dia mety hanana fidirana amin'ny fampahalalana sasany momba anao izahay.
ny Services manolotra anao ny fahaizana misoratra anarana sy miditra amin'ny alàlan'ny antsipirian'ny kaonty media sosialy anao (toa ny fidirana Facebook na Twitter anao). Raha misafidy ny hanao an'io ianao dia hahazo fampahalalana momba anao momba anao avy amin'ny mpamatsy media sosialy izahay. Ny fampahalalana momba ny mombamomba izay azonay dia mety tsy mitovy arakaraka ny mpamatsy haino aman-jery sosialy voakasik'izany, fa matetika kosa dia hanisy ny anaranao, ny adiresy mailaka, ny lisitry ny namanao, ny sarin'ny piraofilinao ary koa ny fampahalalana hafa nofidinao hampahafantarina ampahibemaso amin'ny sehatra media sosialy toy izany. Raha miditra amin'ny Facebook ianao dia mety hangataka fahazoan-dàlana amin'ny alalana hafa mifandraika amin'ny kaontinao, toa ny namanao, ny fizahana, ary ny tianao, ary azonao atao ny misafidy ny hanome na handà anay tsy hanana alalana avy amin'ny tsirairay.
Hampiasainay ny fampahalalana azonay raha tsy amin'ny tanjona voalaza ao amin'ity fampandrenesana momba ny tsiambaratelo ity na izay natao mazava aminao momba ny raharaha manokana. Services. Azafady azafady fa tsy mifehy izahay, ary tsy tompon'andraikitra amin'ny, fampiasana hafa ny mombamomba anao manokana avy amin'ny mpanome haino aman-jery sosialy antoko fahatelo. Manoro hevitra anao izahay handinika ny fampandrenesany momba ny tsiambaratelo mba hahafantaranao ny fanangonana, ny fampiasan'izy ireo ary ny fizaranao ny mombamomba anao manokana ary ny fomba ahafahanao mametraka ny safidinao manokana amin'ny tranokalany sy ny fampiharana azy ireo.
Raha afohezina: Tsy tompon'andraikitra amin'ny fiarovana ny fampahalalana zarainao amin'ny mpamatsy antoko fahatelo manao dokambarotra izahay, nefa tsy mifandraika amin'ny tranokalanay.
The Services mety misy doka avy amin'ny antoko fahatelo izay tsy mifandray aminay ary mety misy rohy mankany amin'ny tranokala hafa, serivisy amin'ny Internet na rindranasa finday. Izahay dia tsy afaka miantoka ny fiarovana sy ny tsiambaratelo momba ny angona omenao an'ireo antoko fahatelo. Izay angona rehetra angonin'ny antoko fahatelo dia tsy voarakitr'ity fampandrenesana momba ny tsiambaratelo ity. Tsy tompon'andraikitra amin'ny atiny na ny fiainana manokana sy ny fomba fiarovana izahay ary ny politikan'ny antoko fahatelo, ao anatin'izany ny tranokala, serivisy na rindranasa hafa izay mety mifandray na avy amin'ny Services. Tokony hojerenao ny politikan'ny antoko fahatelo toy izany ary hifandray amin'izy ireo mivantana hamaly ny fanontanianao.
Raha afohezina: Izahay mitazona ny mombamomba anao raha mbola ilaina mba hanatanterahana ireo tanjona voalaza ao amin'ity fampandrenesana momba ny tsiambaratelo ity raha tsy hoe takian'ny lalàna izany.
Izahay ihany no hitazona ny mombamomba anao raha mbola ilaina amin'ny tanjona voalaza ao amin'ity fampandrenesana momba ny tsiambaratelo ity, raha tsy hoe misy fotoana fitahirizana lava kokoa na takian'ny lalàna (toy ny hetra, kaonty na fepetra ara-dalàna hafa). Tsy misy tanjona amin'ity fampandrenesana ity mitaky anay hihazonana ny mombamomba anao mihoatra ny ny vanim-potoana isian'ny mpampiasa kaonty miaraka aminay.
Rehefa tsy manana raharaham-barotra mitohy ara-dalàna mila fikirakirana ny mombamomba anao manokana izahay, dia hamafa na hanafina an'izany fampahalalana izany, na, raha tsy azo atao izany (ohatra, satria ny mombamomba anao dia voatahiry ao amin'ny arisiva nomanina), dia hiadana izahay tahirizo ny mombamomba anao ary atokàny amin'ny fikarakarana bebe kokoa mandra-pahatongan'ny famafana.
Raha afohezina: Izahay dia mikendry ny hiaro ny mombamomba anao amin'ny alàlan'ny rafitry ny fepetra fiarovana sy fandaminana sy ara-teknika.
Nampihatra fepetra fiarovana ara-teknika sy fandaminana sahaza anay izahay hiarovana ny fiarovana ny mombamomba anay manokana. Na izany aza, na eo aza ny fiambenana sy ny fiezahana hitazomana ny mombamomba anao, tsy misy fampitana elektronika amin'ny Internet na teknolojia fitahirizana fampahalalana azo antoka ho azo antoka 100%, noho izany tsy afaka mampanantena na manome toky izahay fa ny hackers, cybercriminals, na antoko fahatelo tsy nahazoana alalana dia tsy ho azo antoka afaka mandresy ny fiarovana anay, ary manangona, miditra, mangalatra, na manova ny mombamomba anao amin'ny fomba tsy mety. Na dia hanao izay farany azonay atao aza izahay mba hiarovana ny mombamomba anao, ny fampitana ny mombamomba anao aminay sy avy aminay Services atahorana anao. Tokony hiditra amin'ilay Services ao anatin'ny tontolo azo antoka.
Raha afohezina: Izahay dia tsy manangona antonta-tahiry na tsena ho an'ny ankizy latsaky ny 18 taona.
Tsy mangataka angon-drakitra momba ny ankizy latsaky ny 18 taona izahay. Amin'ny fampiasana ny Services, maneho ianao fa 18 farafaharatsiny farafaharatsiny na hoe ray aman-dreny na mpiambina zaza tsy ampy taona toy izany ianao ary manaiky ny fampiasan'ny fiankinan-doha tsy miankina amin'ny zaza Services. Raha fantatsika fa angona manokana avy amin'ireo mpampiasa latsaky ny 18 taona no nangonina, dia hofoaninay ny kaonty ary handray fepetra araka ny antonony mba hamafana avy hatrany ireo angon-drakitra ireo ao amin'ny firaketana anay. Raha tsapanao fa misy angona angoninay avy amin'ny ankizy latsaky ny 18 taona dia mifandraisa aminay privacy@watchrapport.com.
Raha afohezina: Any amin'ny faritra sasany, toy ny faritra ara-toekarena eropeana, dia manan-jo hamela anao hiditra bebe kokoa amin'ny fifehezana ny mombamomba anao. Azonao atao ny mandinika, manova, na mamarana ny kaontinao amin'ny fotoana rehetra.
Any amin'ny faritra sasany (toy ny faritra ara-toekarena eoropeanina), dia manana zon'ny sasany ianao araky ny lalàna fiarovana ny angona azo ampiharina. Mety misy ny zony (i) hangataka fidirana sy hahazoana kopian'ny mombamomba anao, (ii) hangataka fanitsiana na famafana; (iii) hameperana ny fikirakirana ny mombamomba anao manokana; ary (iv) raha azo ampiharina, amin'ny fitaterana angona. Amin'ny toe-javatra sasany, azonao atao ihany koa ny manohitra ny fanodinana ny mombamomba anao. Raha hanao fangatahana toy izany dia ampiasao ny contact details omena etsy ambany. Hodinihinay sy hataonay ny fangatahana rehetra mifanaraka amin'ny lalàna momba ny fiarovana ny angona.
Raha miantehitra amin'ny fanekenao hanodinana ny mombamomba anao izahay, dia manan-jo hisintona ny fanekenao ianao amin'ny fotoana rehetra. Aza adino anefa fa tsy hisy fiatraikany amin'ny maha-ara-dalàna ny fikarakarana alohan'ny hanesorana azy io, ary tsy hisy fiantraikany amin'ny fikarakarana ny mombamomba anao manokana miankina amin'ny antony fanodinana ara-dalàna ankoatry ny fanekena.
Raha mponina ao amin'ny faritra ara-toekarena eropeana ianao ary mino ianao fa tsy manara-dalàna ny fanodinanao ny mombamomba anao, dia manan-jo hitaraina amin'ny tompon'andraikitra mpanara-maso ny fiarovana ny angona eo an-toerana ianao. Azonao jerena eto ny antsipirian'ny fifandraisan'izy ireo: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.
Raha mponina any Suisse ianao dia misy eto ny antsipirian'ny fifandraisana amin'ireo tompon'andraikitra amin'ny fiarovana ny angona: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.
Raha manana fanontaniana na fanamarihana momba ny zonao manokana ianao, dia azonao atao ny mandefa mailaka aminay privacy@watchrapport.com.
Raha te-handinika na hanova ny fampahalalana amin'ny kaontinao ianao amin'ny fotoana mety na hamarana ny kaontinao dia afaka:
Midira ao amin'ny kaonty kaontinao ary havaozy ny kaonty mpampiasa anao.
Mifandraisa aminay amin'ny alàlan'ny fampahalalana momba ny fifandraisana nomena.
Rehefa mangataka ny hanajanonana ny kaontinao ianao dia hofoaninay na hamafana ny kaontinao sy ny fampahalalana avy amin'ny angon-drakitra mavitrika. Na izany aza, mety mitazona fampahalalana sasantsasany amin'ny rakitra izahay mba hisorohana ny fisolokiana, ny olan'ny olana, ny fanampiana amin'ny fanadihadiana rehetra, ny fampiharana ny Fepetran-tsofina ary / na ny fanarahana ny fepetra takian'ny lalàna azo ampiharina.
Cookies sy teknolojia mitovy amin'izany: Ny ankamaroan'ny mpizaha tranonkala dia vonona hanaiky cookies foana. Raha tianao dia matetika ianao no afaka misafidy ny mametraka ny browser-nao hanala ireo cookies ary handà ny cookies. Raha misafidy ny hanaisotra ny cookies ianao na handà ny cookies dia mety hisy fiatraikany amin'ny endri-javatra na serivisy sasany eto aminay izany Services. Mialà amin'ny doka-doka avy amin'ny mpanao dokam-barotra ao amin'ny Services fitsidihana http://www.aboutads.info/choices/.
Mialà amin'ny marketing amin'ny mailaka: Azonao atao ny misintona ny lisitry ny mailaka amin'ny marketing amin'ny fotoana rehetra amin'ny fipihana ny rohy tsy misoratra anarana amin'ireo mailaka alefanay na amin'ny alàlan'ny fifandraisana aminay amin'ny fampiasana ireo antsipiriany voalaza etsy ambany. Hesorina amin'ny lisitry ny mailaka marketing ianao - na izany aza, mety mbola mifampiresaka aminao ihany izahay, ohatra, handefasana mailaka mifandraika amin'ny serivisy ilaina amin'ny fitantanana sy fampiasana ny kaontinao, hamaliana ny fangatahana serivisy, na ho an'ny hafa tanjona tsy marketing. Raha tsy hiala ianao dia azonao atao:
Midira amin'ny fikirakira kaonty ary manavao ny safidinao.
Ny ankamaroan'ny mpizaha tranonkala sy ny rafitra fikirakirana finday ary ny rindranasa finday dia misy fampiasa Do-Not-Track ("DNT") azonao ampiasaina mba hilazana ny safidinao manokana mba tsy hanana data momba ny hetsika fitetezana an-tserasera araha-maso sy angonina. Amin'ity dingana ity dia tsy misy fenitra teknolojia mitovy amin'ny fanekena sy fampiharana ny fambara DNT no vita. Araka izany, tsy mamaly ireo famantarana ny mpizahatany DNT izahay amin'izao fotoana izao na ny mekanika hafa izay mampita ny safidinao ho azy tsy hojerena amin'ny Internet. Raha misy fenitra momba ny fanarahan-dia an-tserasera noraisina izay tsy maintsy arahinay amin'ny ho avy, dia hampahafantatra anao momba izany fomba izany izahay amin'ny kinova nohavaozina tamin'ity fampandrenesana momba ny tsiambaratelo ity.
Raha afohezina: Eny, raha mponina ao California ianao, dia mahazo zo manokana momba ny fidirana amin'ny mombamomba anao manokana.
Ny kaody sivily California 1798.83, fantatra ihany koa amin'ny hoe "Shine The Light" dia mamela ny mpampiasa anay izay mponina ao California hangataka sy haka avy aminay, indray mandeha isan-taona ary tsy andoavam-bola, fampahalalana momba ny sokajy fampahalalana manokana (raha misy) izahay nampahafantarina tamin'ny antoko fahatelo ho an'ny tanjona ara-barotra mivantana sy ny anarana ary ny adiresin'ny antoko fahatelo rehetra niarahanay nizara ny mombamomba anay tamin'ny taona kalandrie teo aloha. Raha mponina ao California ianao ary maniry ny hanao fangatahana toy izany, dia apetraho aminay an-tsoratra ny fangatahanao, amin'ny alàlan'ny fampahalalana momba ny fifandraisana voalaza etsy ambany.
Raha latsaky ny 18 taona ianao dia mipetraha any Kalifornia ary manana kaonty voasoratra anarana fanompoana, manan-jo hangataka fanesorana ireo angona tsy ilaina izay apetrakao ampahibemaso ao amin'ny Services. Raha mangataka ny fanesorana ireo angona toy izany dia mifandraisa aminay amin'ny alàlan'ny fampahalalana mifandraika omena etsy ambany, ary ampidiro ny adiresy mailaka mifandraika amin'ny kaontinao sy ny fanambarana izay onenanao any California. Hataonay antoka fa tsy haseho ampahibemaso amin'ny Services, saingy azafady mba fantaro fa ny angona dia mety tsy ho esorina tanteraka na feno amin'ny rafitray rehetra (oh: backup, sns.).
Fanamarihana momba ny tsiambaratelo CCPA
Ny fitsipiky ny lalàna any California dia mamaritra ny "mponina" iray toy ny:
(1) ny olona tsirairay izay ao amin'ny State of California ho an'ny hafa fa tsy tanjona vetivety na mandalo ary
(2) ny olona tsirairay izay misy fonenana ao amin'ny State of California izay ivelan'ny State of California ho an'ny tanjona vetivety na mandalo
Ny olona hafa rehetra dia faritana ho "tsy mponina."
Raha mihatra aminao io famaritana ny "mponina" io dia tsy maintsy manaraka ny zony sy adidy sasany momba ny mombamomba anao manokana izahay.
Inona avy ireo sokajy fampahalalana manokana angoninay?
Nanangona ireto sokajy fampahalalana manokana ireto izahay tao anatin'ny roa ambin'ny folo (12) volana lasa:
Ny antsipirian'ny fifandraisana, toy ny tena anarana, solonanarana, adiresy paositra, nomeraon-telefaona finday, laharam-pahamehana manokana, mpamaritra an-tserasera, adiresy Internet Protocol, adiresy mailaka ary anaran'ny kaonty
B. Ireo sokajy fampahalalana momba anao manokana voatanisa ao amin'ny statuta an'ny mpanjifa any California
Anarana, fampahalalana momba ny fifandraisana, fanabeazana, asa, tantaram-asa ary fampahalalana ara-bola
C. Toetra fanasokajiana voaaro araky ny lalàna Kalifornia na federaly
Miralenta sy daty nahaterahana
D. Fampahalalana momba ny varotra
Fampahalalana momba ny fifanakalozana, tantara momba ny fividianana, antsipiriany ara-bola ary fampahalalana momba ny fandoavam-bola
E. Fampahalalana biometrika
Tapak'endrika sy voiceprints
F. Internet na hetsika tambajotra mitovy amin'izany
Tantara momba ny fizahana, tantaram-pikarohana, fitondran-tena an-tserasera, angon-drakitra mahaliana, ary fifandraisana amin'ny tranokalanay, rindranasa, rafitra ary dokam-barotra hafa
G. Data momba ny geolocation
Toerana misy ny fitaovana
H. Audio, elektronika, sary, termal, olfactory, na fampahalalana mitovy amin'izany
Sary sy rakipeo, rakipeo na rakipeo antso noforonina mifandraika amin'ny asantsika asa
I. Fampahalalana momba ny asa na asa
Ny antsipirian'ny fifandraisan'ny orinasa mba hanomezana anao ny serivisinay eo amin'ny sehatry ny asa, ny titre misy ny asa ary koa ny mari-pahaizana momba ny asa raha toa ka mangataka asa miaraka aminay ianao.
J. Fampahalalana momba ny fanabeazana
Fampandrenesana sy fampahalalana ho an'ny mpianatra
K. Fanatsoahan-kevitra nalaina avy amin'ny mombamomba anao manokana
Fakan-kevitra nalaina avy amin'ny iray amin'ireo mombamomba anao nangonina voalaza etsy ambony mba hamoronana profil na famintinana, ohatra, ny tian'ny olona iray sy ny toetrany
Azonay atao ihany koa ny manangona fampahalalana manokana hafa ivelan'ireo sokajy ireo tranga izay ifandraisanao aminay manokana, an-tserasera, na an-telefaona na mailaka ao anatin'ny:
Mahazo fanampiana amin'ny alàlan'ny fantsom-panohanan'ny mpanjifantsika;
Fandraisana anjara amin'ny fanadihadiana na fifaninanana ho an'ny mpanjifa; SY
Fanamorana ny fandefasana ny serivisinay ary hamaly ny fanontanianao.
Ahoana no ampiasana sy hizaranao ny mombamomba anao?
Jereo ny Rapport, LLC manangona sy mizara ny mombamomba anao amin'ny:
Cookies kendrena / cookie mividy
Cookies amin'ny media sosialy
Fanilo / Pixel / Tags
Plugins amin'ny media sosialy: Facebook, Twitter , Google ary Amazon. Mampiasa ny haino aman-jery sosialy izahay, toy ny bokotra Facebook Like, sy ireo widgets, toy ny bokotra 'Share This' ao amin'ny tranokalanay. Ireo fiasa toy izany dia mety handefa ny adiresy Internet Protocol (IP) anao ary hanaraka izay pejy tsidihinao amin'ny tranokalanay. Azontsika atao ny mametraka cookie mba hahafahan'ny fiasa miasa tsara. Raha miditra amin'ny sehatra media sosialy ianao ary mifampiditra amin'ny widget na bokotra an'io sehatra media sosialy io dia azo soratana amin'ny mombamomba anao ny sehatra media sosialy toy izany. Mba hisorohana an'izany dia tokony hivoaka avy ao amin'ilay sehatra media sosialy ianao alohan'ny hidirana na hampiasa ilay Services. Ny fampiasa amin'ny haino aman-jery sosialy sy ny widget dia mety hampiantranoan'ny antoko fahatelo na hampiantrano anay mivantana amin'ny tranokalanay. Ny fifandraisanao amin'ireto endri-javatra ireto dia tarihin'ny fampandrenesana tsiambaratelo momba ireo orinasa manome azy ireo. Amin'ny fipihana ny iray amin'ireo bokotra ireo dia manaiky ny fampiasana an'ity plugin ity ianao ary vokatr'izany ny famindrana ny mombamomba anao amin'ny serivisy media sosialy mifanaraka amin'izany. Tsy voafehinay ny votoatiny sy ny habetsahan'ireo angon-drakitra ampitaina ireo ary koa ny fanodinany fanampiny.
Ny fampahalalana bebe kokoa momba ny fanangonana angon-drakitra sy ny fizarana fanazaran-tena dia hita ao amin'ity fampandrenesana manokana ity.
Azonao atao ny miala amin'ny fivarotana ny mombamomba anao amin'ny alàlan'ny fandefasana cookies amin'ny cookies Cookies Preferensi ary tsindrio ny rohy Aza mivarotra ny mombamomba anao manokana ao amin'ny pejy fandraisam-bahiny.
Azonao atao ny mifandray aminay amin'ny alàlan'ny mailaka ao amin'ny help@watchrapport.com, amin'ny fiantsoana maimaim-poana amin'ny (800) 571-7765, amin'ny fitsidihana https://watchrapport.com/pages/contact-us, 297 Kingsbury Kilasy, Suite 100 Lake Tahoe (Stateline) NV 89449, na amin'ny alàlan'ny firesahana ny antsipirian'ny fifandraisana eo ambanin'ny antontan-taratasy ity.
Raha mampiasa agents ofisialy ianao hampiasa ny zonao hisafidy dia azonay atao ny mandà ny fangatahana raha toa ka tsy mandefa porofo ny masoivoho nahazo alalana hiasa amin'ny anaranao.
Hizara olon-kafa ve ny mombamomba anao?
Azonay atao ny mampahafantatra ny mombamomba anao amin'ny mpanome tolotra anay aorian'ny fifanarahana an-tsoratra misy eo aminay sy ny mpanome tolotra tsirairay avy anay. Ny mpanome tolotra tsirairay dia orinasa mitady tombom-barotra izay manodina ny mombamomba antsika.
Ny lisitr'ireo mpanome serivisy anay dia hita eto ambany.
Azontsika atao ny mampiasa ny mombamomba anao manokana ho an'ny tanjonay manokana, toy ny fanaovana fikarohana anatiny ho fampandrosoana teknolojia sy fampisehoana. Tsy heverina ho "fivarotana" ny angon-drakitrao manokana izany.
Jereo ny Rapport, LLC dia nanambara ireto sokajy fampahalalana manokana ireto ho an'ny antoko fahatelo ho an'ny orinasa na tanjona ara-barotra tao anatin'ny roa ambin'ny folo (12) volana lasa:
Sokajy B. Fampahalalana manokana, araka ny voafaritry ny lalànan'ny mpanjifa any California, toy ny anaranao, fampahalalana momba ny fifandraisana, fanabeazana, asa, tantaram-asa ary fampahalalana ara-bola.
Ny sokajin'ny antoko fahatelo izay nampahafantarinay ny mombamomba anay ho an'ny orinasa na amin'ny lafiny ara-barotra dia hita eo ambanin'ny "IZA NO TOKONY HOAZANA NY FOMBA ANAO?".
Jereo ny Rapport, LLC dia namidy ireto sokajy fampahalalana manokana manaraka ireto tamin'ny antoko fahatelo tao anatin'ny roa ambin'ny folo (12) volana lasa:
Ny sokajy antoko fahatelo izay amidinay ny mombamomba anao manokana dia:
Ny zonao manoloana ny angona anao manokana
Zo hangataka famafana ny data - Fangatahana hamafana
Azonao atao ny mangataka ny famafana ny mombamomba anao. Raha mangataka anay ianao hamafa ny mombamomba anao, hanaja ny fangatahanao izahay ary hamafa ny mombamomba anao manokana, miankina amin'ny fanilikilihana sasany nomen'ny lalàna, toy ny (fa tsy ferana amin'ny) fampiasan'ny mpanjifa hafa ny zony amin'ny fahalalaham-pitenenana. , ny fepetra takianay amin'ny fanarahan-dalàna vokatry ny adidy ara-dalàna na ny fanodinana rehetra izay mety takiana mba hiarovana amin'ny hetsika tsy ara-dalàna.
Zo ampahafantarina - Fangatahana ho fantatra
Miankina amin'ny toe-javatra no azonao atao:
na manangona sy mampiasa ny mombamomba anao manokana izahay;
ny sokajy ny mombamomba anao izay angoninay;
ny tanjon'ny fampiasana ny mombamomba anao nangonina;
na mivarotra ny mombamomba anao amin'ny antoko fahatelo izahay;
ireo sokajy fampahalalana manokana izay amidinay na nambaranay ho an'ny tanjona ara-barotra;
ny sokajin'ny antoko fahatelo izay namidy na nampahafantarina ny mombamomba azy ho an'ny tanjona ara-barotra; SY
ny tanjona ara-barotra na ara-barotra amin'ny fanangonana na fivarotana mombamomba anao.
Araka ny lalàna manan-kery, tsy adidintsika ny manome na mamafa ny mombamomba ny mpanjifa izay tsy fantatra intsony ho valin'ny fangatahan'ny mpanjifa na hamantatra indray ny angon-drakitry ny tsirairay hanamarinana ny fangatahan'ny mpanjifa.
Zo amin'ny tsy fanavakavahana amin'ny fampiharana ny zon'ny tsiambaratelo ho an'ny mpanjifa
Tsy hanavakavaka anao izahay raha mampiasa ny zonao manokana.
Rehefa mahazo ny fangatahanao izahay dia mila manamarina ny mombamomba anao izahay mba hamaritana fa ianao no olona mitovy izay ananantsika ny fampahalalana ao amin'ny rafitray. Ireo ezaka fanamarinana ireo dia mitaky anay hangataka aminao hanome vaovao hahafahanay mampifanaraka azy amin'ny fampahalalana nomenao anay. Ohatra, miankina amin'ny karazana fangatahana alefanao, dia azonao atao ny mangataka anao hanome vaovao sasany hahafahanay mampifanaraka ny fampahalalana omenao miaraka amin'ny fampahalalana efa anananay, na afaka mifandray aminao izahay amin'ny alàlan'ny fomba fifandraisana (ohatra telefaona na mailaka) izay nomenao anay teo aloha. Azontsika atao koa ny mampiasa fomba fanamarinana hafa araky ny toe-javatra miseho.
Ny mombamomba anao manokana izay omena amin'ny fangatahanao ihany no hampiasainay hanamarinana ny mombamomba anao na ny fahefana anananao hanao izany fangatahana izany. Hatramin'izay azo atao dia tsy hangataka fampahalalana fanampiny avy aminao izahay ho an'ny fanamarinana. Raha, na izany aza, raha tsy afaka manamarina ny mombamomba anao izahay avy amin'ny fampahalalana efa notazoninay, dia mety hangataka aminao izahay hanome vaovao fanampiny ho an'ny fanamarinana ny mombamomba anao, sy ho an'ny fiarovana na fisorohana fisorohana. Hofafantsika toy izany koa ny fampahalalana omena fanampiny raha vantany vao vita ny fanamarinana anao.
Zon'ny fiainana manokana
azonao atao ny manohitra ny fanodinana ny data-nao manokana
azonao atao ny mangataka fanitsiana ny datao manokana raha diso na tsy misy ifandraisany intsony, na mangataka ny hamerana ny fikirakirana ny angona
azonao atao ny manendry solontena iray nahazo alalana hanao fangatahana eo ambanin'ny CCPA amin'ny anaranao. Azontsika atao ny mandà ny fangatahana avy amin'ny masoivoho manana fahefana izay tsy mandefa porofo fa nomena alalana ara-dalàna izy ireo hiasa amin'ny anaranao mifanaraka amin'ny CCPA.
Azonao atao ny mangataka ny hiala amin'ny fivarotana ny mombamomba anao amin'ny antoko fahatelo. Rehefa mahazo fangatahana hiala izahay dia handray andraikitra araka izay tratra araka izay azo atao, fa tsy mihoatra ny 15 andro aorian'ny datin'ny fandefasana fangatahana.
Raha te hampiasa ireo zony ireo dia afaka mifandray aminay ianao amin'ny alàlan'ny mailaka ao amin'ny help@watchrapport.com, amin'ny fiantsoana maimaim-poana amin'ny (800) 571-7765, amin'ny fitsidihana https://watchrapport.com/pages/contact-us, 297 Kingsbury Kilasy, Suite 100 Lake Tahoe (Stateline) NV 89449, na amin'ny alàlan'ny firesahana ireo antsipirian'ny fifandraisana eo ambanin'ny antontan-taratasy ity. Raha manana fitarainana momba ny fomba fitantananay ny angon-drakitrao izahay, dia te-hihaino anao izahay.
Raha afohezina: Eny, havaozinay ity fanamarihana ity raha ilaina mba hitazomana hatrany ny lalàna mifandraika amin'izany.
Azontsika atao ny manavao izany fampandrenesana manokana izany indraindray. Ny kinova nohavaozina dia haseho amin'ny daty "nohavaozina" nohavaozina ary ny kinova nohavaozina dia hahomby raha vantany vao azo. Raha manisy fanovana lehibe momba ity fampandrenesana momba ny tsiambaratelo ity izahay, dia mety hampandre anao izahay amin'ny alàlan'ny famoahana am-pahibemaso izany fampandrenesana izany na amin'ny alàlan'ny fandefasana fampandrenesana mivantana anao. Manentana anao izahay handinika io fampandrenesana momba ny tsiambaratelo io mba hampahafantarina anao ny fomba iarovanay ny mombamomba anao.
Raha manana fanontaniana na hevitra momba an'io fampandrenesana io ianao dia azonao atao izany mailaka anay at privacy@watchrapport.com na amin'ny alàlan'ny paositra amin'ny:
Jereo ny Rapport, LLC
297 Kilasy Kingsbury
Miorina amin'ny lalàna azo ampiharina amin'ny firenenao, azonao atao ny manan-jo hangataka fidirana amin'ny fampahalalana manokana angoninay aminao, hanova izany vaovao izany, na hamafa azy amin'ny toe-javatra sasany. Raha mangataka ny hijery, hanavao, na hamafana ny mombamomba anao, azafady manolotra taratasy fangatahana amin'ny fipihana Eto. Hamaly ny fangatahanao izahay ao anatin'ny 30 andro.
Nampiasaina ity politika manokana ity Generator momba ny tsiambaratelo momba ny fiainana manokana.